သရုပ်ဆောင်များ – Myitter
“သူများမယားငယ်မခံသရွေ့ ကျွန်မကတော့ အေးဆေးပဲ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း
နာမည်ကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပက်သက်လို့ လူစိတ်ဝင်စားမှုခံနေခဲ့ရတဲ့ ချမ်းချမ်းက ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ သူမတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ ခံစားချက်အချို့ကို ရင်ဖွင့်လာပြန်ပါတယ်။ သူများမယားငယ်မခံသရွေ့ ကျွန်မကတော့ အေးဆေးပဲ လို့လည်း ချမ်းချမ်းက စကားကုန်ကုန်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ မနေ့ မတ်လ ၁၅ ရက်ကည တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
” ညီမဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို စုံတွဲတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ဦး “
မတ်လ (၁၂)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြော်အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး ကေတာ့ တကယ်ကို ခမ်းနားထည်ဝါလွန်းပြီး အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်ျးမားသာမပါ ပရိသတ် ကြားမွာပါ အားကျစရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမတို့ရဲ့ ညစာစားပွဲကိုတော့ အမဖြစ်သူ စိုးမြတ်နန္ဒာက တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုကာ ဆုတောင်း စကာျးမားလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမနဲ့အတူ စိုးသူလည်း […]
အဆိုတော် မနောတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကို ထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အမ်တီဗွီပါ သေချာရိုက်ထားတဲ့ ဒီသီချင်းကို မနေ့ မတ်လ ၁၄ ရက်ညကပဲ သူအသုံးပြုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကတော့ ကလေးငယ်တွေ စာဖတ်ဝါသနာပါဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တင်လိုက်ပြီနော် အားပေးပါအုန်းဗျာ ရတနာတစ်ပါးကလေးငယ်လေးများ […]
ပရိသတ်အချစ်တော် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ကစားသမားကြီး အောင်လအန်ဆန်းကို ပရိသတ်အားလုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်းကတော့ လက်ရှိ One Championship ရဲ့ ချန်ပီယံ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက မတူညီတဲ့ ဝိတ်တန်းနှစ်ခုကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး သမိုင်းသစ်ရေးထိုးထားတာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း သိမယ်ထင်ပါတယ်။ လက်တလော အောင်လအန်ဆန်းကတော့ ကြော်ငြာဗီဒီယိုများစွာကို ရိုက်ကူးနေကြောင်း သိရပါတယ်။ […]
ထူးအယ်လင်းရင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ စပါယ်ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးငယ့်  ရဲ့ စကား”
အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းဟာ ရင်နှင့်စရာစာသားလေးကို သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ မျှဝေပေးထားပါတယ်။ စားသောက်နေတုန်းမှာ စပါယ်ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးငယ်က ပန်းလာရောင်းစဉ်မှာ ထူးအယ်လင်းရဲ့လေးစားစရာလုပ်ရပ်တစ်ခုကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတော့ “သားလေး မင်း ကျောင်းနေသေးလား ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ၆ တန်းတက်နေတယ်ဗျ.. မင်း စပါယ်ပန်း ဒီည ရောင်းတာ အကုန် ကုန်သလား ? […]
တေးသံရှင်ရွှေထူးနဲ့ ပန်ကိတ်တို့စုံတွဲလေးကတော့ ပရိတ်သတ်တွေများစွာအားကျနှစ်သက်ကြတဲ့စုံတွဲလေးတစ်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကတော့ အနေဝေးပေမယ့် နှလုံးသားကအမြဲနီးစပ်နေပြီး တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်လဲအရမ်းချစ်ကြတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင် လက်တွဲလာတဲချစ်သူသက်တမ်းဟာ ၆ နှစ်နဲ့ ၄ လကျော်ထိတောင်ကြာမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်ကြားမှာမိုင်တိုင်တွေသိန်းချီခြားထားပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အလွမ်းပြေဖြစ်စေမယ့်အရာလေးတွေနဲ့ ယနေ့ထက်ထိတိုင်လက်တွဲလာတာလေးက အားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ တေးသံရှင်ရွှေထူးကလဲ လက်ရှိမှာအောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုရဲ့ရမက်နောက်ကို မလိုက်သွားပဲချစ်သူလေးအပေါ်ကိုသစ္စာရှိရှိချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူလေးတစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ ပရိတ်သတ်တွေလဲလက်ခံယုံကြည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရွှေထူးရဲ့ချစ်သူလေး ပန်ကိတ်ရဲ့အမူအရာလေးတွေကလဲ တအားချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့အတွက် […]
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေး အေးမြတ်သူမှာ ပုရိသတွေ မျက်စောင်းထိုးနေတဲ့ အပျိုကြီးစာရင်းဝင် အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်တွေကတော့ အပျိုကြီးပဲ လုပ်ပါဆိုပြီး အေးမြတ်သူကို မကြာ ခဏ fb Comment တွေကတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေး မမြတ်လေးကရော ..အပျိုကြီးပဲ လုပ်မှာလား..? အေးမြတ်သူကတော့ […]
စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲညမှာ ထိန်း မ ရအောင် ကဲ ခဲ့ တဲ့ ခိုင်သင်းကြည် ရဲ့ ဗွီ ဒီ ယိုဖိုင်
အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ညမှာ အပြတ်ကဲခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကတော့ ဖေ့စ်ဘွက်လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ပျော်နေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တစ်ယောက် ဆက်တိုက်ပဲ ကနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ကို လူစိတ်ဝင်စားမှုလည်း များခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၂ ရက်ညက အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို အနုပညာရှင်များစွာတက်ရောက် အးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ […]
Zaw Gyi Version – သဘင်(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌလေး ဖိုးချစ်မင်းမင်းဦးဇာတ်သဘင်အဖွဲ့ရဲ့ဇာတ်ကားမှောက်ပြီးထိခိုက်သေသုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြောင့်ေ အာင်လံမြို့တွင်ကပြနေသည့်ကြားက ယနေ့ည နောက်ဆုံးညမှာ ဖိုးချစ်မကတော့ဘဲသူ့ရဲ့ညီတပည့်လေး အောင်စန်းပွင့်ကို သူ့ကိုယ်စားကပြပေးဖို့ထားခဲ့ပြီး အောင်လံမြို့ ဒုတိယည ပွဲစဉ်ကပြ၍ရသော ဇာတ်တစ်ဖွဲ့လုံးစာ ကျပ်သိန်း၃၀ကို ထိခိုက်သေဆုံးကြသောသဘင်အနုပညာရှင်များအတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လှုဒါန်းပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ […]
အိမ်နဲ့ခြံကို ဘဏ်မှာအပေါင်ထားပြီး သဘင်သမားတွေအတွက် ငွေချေးပေးခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ် မြန်မာနိုင်ငံ သဘင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ မင်းသားဖိုး ချစ်က သဘင်လောကသားတွေအတွက် ကူညီနိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ခြံကို ဘဏ်မှာအပေါင်ထားပြီး ငွေထုတ်ချေးပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖိုးချစ်ရဲ့အကြောင်းကို ပတ္တမြားကေခိုင်က စန်းဒေးဂျာနယ်ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေဆိုလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ဥက္ကဌ ကိုဖိုးချစ်က သူ့အိမ်နဲ့ […]